Gịnị Mere My iPhone Gbanyụọ Mgbe M Ka Nwere Ndụ Batrị Ndụ? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
iphone 5s ihuenyo na -aga oji
otu esi eweghachi ụlọ ahịa ngwa m
otu esi arụzi bọtịnụ ụlọ na iphone 6
iphone rapaara na akara apple ma ghara iweghachite
iphone enweghị ike itinye akaụntụ google
Gịnị Mere My iPhone Gbanyụọ Mgbe M Ka Nwere Ndụ Batrị Ndụ? Nke a bụ The Real Idozi!
Aga m agwa gị ihe kpatara iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod ji gbanyụọ na mberede mgbe ị ka nwere 30%, 50%, ma ọ bụ pasent ọ bụla nke batrị fọdụrụ na kpọmkwem ihe ị ga-eme iji dozie nsogbu ahụ, ọ bụrụ na ọ nwere ike dozie. Aga m eji iPhone n'isiokwu a, mana ọ bụrụ na ị nwere iPad ma ọ bụ iPod nwere nsogbu a, soro - ihe ngwọta ahụ bụ otu.
Aga m eme ihe n'eziokwu ozugbo: Enweghị m ike ịkwado na anyị ga-enwe ike idozi iPhone gị. Mgbe ụfọdụ, nsogbu metụtara iPhones na-enweghị usoro na-emechi site na mmiri mebiri ma ọ bụ ihe ọghọm ndị ọzọ. Ma adala mba! Ọtụtụ oge, ị nwere ike idozi nsogbu a n'ụlọ.
Enweela M Batrị na-ezighi ezi, nri?
Ọ bụchaghị. Ọtụtụ mgbe, gịnị bụ n'ezie na-aga n’ihu bụ na iPhone gị anaghị agwa batrị okwu n’ụzọ ziri ezi. Ihe ngwanrọ nke iPhone gị bụ maka ileba anya na ndụ batrị fọdụrụ na iPhone gị. Ọ bụrụ na ngwanrọ ma ọ bụ ngwa ngwa anaghị ekwurịta okwu nke ọma na batrị ahụ, ọ gaghị egosipụta pasent kwesịrị ekwesị.
Dịka ngwa dị na iPhone gị, ngwa femụwe gị iPhone nwere ike ịnwe nsogbu.
Chere. Nke a abụghị omimi karịa Nsogbu sọftụwia dị mfe?
Eeh. Nke a abụghị nsogbu ngwanrọ ngwanrọ dị mfe ebe batrị gị dị igbapu ngwa ngwa n'ihi na ngwa gị na-akụda. Mana ọ bụchaghị nsogbu ngwaike - yabụ anyị kwesịrị ilebara iPhone gị anya femụwe . Yabụ kedu ihe ọ bụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị 'nro' -ware, na ọ bụghị 'siri ike' -ware, mgbe ahụ 'Firm' -ware ya.
Ndozi Maka iPhones Na-agbanyụ Ndụ Ndụ Batrị Renọgide
Idozi okwu a na iPhone mechisịrị ọnụ n'agbanyeghị na ọ na-ekwu na ndụ batrị ka fọdụrụ, anyị ga-eme 'DFU Restore'. DFU na-anọchi anya Nwelite Ngwaọrụ Ngwaọrụ.
iphone m na -akwụsị ịkpọ oku
Otu DFU weghachiri software nke iPhone gị na femụwe, n'ihi ya, ọ bụ ihe ọbụna ụdị miri emi nke iweghachi karịa etinye gị iPhone n'ime mgbake mode. Lelee edemede m ka imụta olee otú DFU weghachi gị iPhone ! Emechaa, laghachite ebe a ka ịmechaa.
itunes anaghị achọpụta iphone 5
Gị iPhone kwesịrị oge iji chegharịa
Ugbu a iPhone gị dị mma dịka ihe ọhụụ na ngwa gị niile na-ebudata, nye ekwentị gị ụbọchị ole na ole iji chetaghachi ma mara batrị ọzọ. M nwere ike ikwu n'ụzọ zuru ezu odori gị iPhone na-ahapụ ya n'ụzọ zuru ezu ihapu a di na nwunye ugboro tupu ikwusa nsogbu na eze ofu ma ọ bụ.
Mgbe ’ve Nwere Ihe Ọzọ
Ọ bụrụ na esemokwu ahụ abịaghachi mgbe ịmechara DFU weghachi, ị kpochapụrụ ohere na ngwanrọ ma ọ bụ nsogbu ngwa ngwa na-eme ka iPhone gị gbanyụọ na ndụ batrị fọdụrụ ma ọ bụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ịwụpụ site na otu pasent iji ozo. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, i nwere ike ịrụkwa iPhone gị.
Ọ bụrụ n’ị gafere Apple, ị nwere ike ịga na Storelọ Ahịa Apple dị na mpaghara (buru ụzọ mee oge), ma ọ bụ malite usoro mmezi na ntanetị . Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ dị ọnụ ala, m na-akwado Pulse , ọrụ nke mmadụ nke nwere ike ịbata dịka nkeji 30 iji dochie batrị gị, ma na-enye nkwa maka ndụ ha niile na ọrụ ha.
Ụfọdụ ndị mmadụ gbalịa jiri ihe mpụga batrị mkpọ dị ka ndị ị ga-ahụ na Amazon dị ka ihe nkwụsịtụ nwa oge, mana ọ bụrụ na iPhone gị mebiri emebi, ọ nwere ike ọ gaghị enyere aka ma ọlị.
Daalụ maka ịga leta Payette Forward. Enwere m obi ike na isiokwu a nyeere gị aka ịkwụsị iPhone gị na ịgbanyụ mgbe ọ ka na-egosi pasent nke ndụ batrị fọdụrụ. M na-achọ gị zuru kacha mma nke chioma na olileanya na-anụ gị! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ, ndị Payette Na-aga n'ihu Facebook Group bụ ezigbo ebe iji nweta azịza.